Creative Writing » အလွမ်း​ပြေစကား​တောင်​ မ​ပြောလိုက်​ရဘူး – ၁	5
ဟ ….. ဠ …. အ ​စော​စောစီးစီး လွမ်း​နေကုန်​ပဟ ။ ​ပေါ့​လေ ……. သီးချင်း က ​နေ၀န်းနီ တို့ ငယ်​ငယ်​ က သီချင်း ဆို​နေတဲ့ ​ကောင်​မ​လေးကလည်း ငယ်​ငယ်​ပဲ ရှိ​သေးတယ်​ ။ ဟိုက်​ ​နေ၀န်းနီ ရဲ့ မိတ်​​ဆွေ ကြီး ‘ ကိုထွန်းအံ့ ‘ သမီးပါလား ။ တစ်​​လောကပဲ သူ့သမီး ​ကျောင်းမတက်​ချင်​​တော့ဘူး အလုပ်​​လေးဘာ​လေး အဆင်​​ပြေရင်​ ခိုင်းချင်​တယ်​ဆိုလို့ ​နေ၀န်းနီပဲ သူငယ်​ချင်းရဲ့ ကုန်​စုံဆိုင်​မှာ အလုပ်​သွင်း​ပေးခဲ့​သေးတယ်​ ။ ​ကောင်​မ​လေးက ကိုးတန်းဆိုပဲမဲ့ ​ကျောင်းစိမ်း​လေးနဲ့ တုန်းကသာ ငယ်​ရုပ်​ဆင်​​နေတာ ။ အရပ်​၀တ်​နဲ့ဆို​တော့ ထွားလာသလိုပဲ ။ မနှစ်​ကတည်းက ​ကျောင်းမတက်​တစ်​ရက်​ တက်​တစ်​ရက်​ လုပ်​​နေလို့ ကိုထွန်းအံ့​ကော သူ့မိန်းမ​ကော ခု သီချင်းဆိုလာတဲ့ ​ကောင်​မ​လေး​ကော ​တော်​​တော်​ ​ပြောပစ်​ဖူး​သေးတယ်​ ။ ​ကျောင်းပိတ်​ရက်​ကျ​တော့ ​ကောင်​မ​လေးက သူ​ကျောင်းမ​နေချင်​​တော့ဘူးတဲ့ ။ ​ဈေးထဲမှာ အလုပ်​ရရင်​ လုပ်​ချင်​တယ်​ဆို့လို့ ။ သူငယ်​ချင်း ဆိုင်​ကို အတင်းအကျပ်​​ပြော ။ အဲ့မှာ သွင်း​ပေးခဲ့တာ နှစ်​လ​လောက်​ပဲ ရှိဦးမယ်​ ။ သူငယ်​ချင်းဆိုင်​က ​ဈေးထဲကို ပြန်​ဖြန့်​တဲ့ လက်​ကားဆိုင်​ဆို​တော့ အလုပ်​သမား များ​ပေမဲ့ နား​နေရတယ်​မရှိဘူး ။ အဲ့တာ​ကြောင့်​ ပြန်​​ပြေးလာတာလား ။ ဟိုဟို ဒီဒီ မျက်​နှာပျက်​စရာ ပြဿနာ​တွေ ဘာ​တွေများဖြစ်​ခဲ့ ​သေးလား​ပေါ့ ။ အ​တွေး​တွေသာပွား​နေတာ ။ ကိုထွန်းအံ့ နဲ့ ​တော်​​တော်​နဲ့ မဆုံဖြစ်​ပါဘူး ။ သူကလည်း အလုပ်​စုံတယ်​ ။ ​ဂွေးသီး ဆွတ်​တဲ့ အချိန်​ ​ပွဲစား​နောက်​က လိုက်​ပြီး ​ဂွေးသီး ဆွတ်​တယ်​ ။ အလှူချိန်​​ရောက်​ရင်​ ​မောင်​ရင်​​လောင်းထိန်း ။ ​နောက်​ ချွဲ ထိုး လည်း ​ကောင်းတယ်​ ဆိုပဲ ။ အလှူ တစ်​ပွဲ ​လေးငါး​ထောင်​​တောင်​ရတယ်​ ဆိုပဲ ။ အလှူရှင်​က ရက်​မသတ်​မှတ်​ခင်​ကတည်းက သူ့ကိုကြိုချိတ်​ရတယ်​ ဆိုပဲ ။ အလှူရက်​မှာ သူ မအားမှာစိုးလို့ ။ တစ်​ချို့များသူအားတဲ့ ရက်​ ကို အလှူ လှည့်​ဖို့ ရက်​​ရွေ့​ပေးရတာ​တောင်​ရှိသတဲ့ ။ သူ့သား အကြီး​ကောင်​က အရပ်​ ဇာတ်​​လေးမှာ ဂစ်​တာ လိုက်​တီးတယ်​ဆိုပဲ ။ တစ်​နှစ်​က သူ့သား ဇာတ်​နဲ့ စာချုပ်​ချုပ်​ဖို့ သက်​​သေ​တောင်​လိုက်​သွား​ပေးရဖူးတယ်​ ။ အံမာ ​နေ၀န်းနီ တို့ တပ်​ကုန်းမြို့​လေး ​ပေါ့​သေး​သေးမထင်​ပါနဲ့ ။ ဗလာဆိုင်းကလည်း ​လေးခု​လောက်​ရှိသတဲ့ ။ ဇာတ်​ကလည်း နှစ်​ခု​တောင်​ရှိ ဆိုပဲ ။ ထားပါ ။ ကိုထွန်းအံ့ နဲ့ ​တွေ့မှ ​မေးကြည့်​ရဦးမယ်​လို့ စိတ်​ထဲမှာ ​တေးထားမိ​ပေမဲ့ မြို့​သေး​သေး​လေးမှာ ​နေကြတာ​ပေမဲ့ လူချင်း​တော်​​တော်​နဲ့ မဆုံဖြစ်​ဖူး ။ ​နေ၀န်းနီ About naywoon ni
Foreign Resident says:့ မြေပြန့်က တပ်​ကုန်းမြို့ ကလည်း ၊
naywoon ni says: ရှိတယ်​ အဘ​ဖော ကျ​နော်​သိသ​လောက်​ ” လယ်​​ဝေး” ရမည်းသင်း ” ” သာစည်​ ” မြို့​တွေမှာလည်းရှိတယ်​ ။ ​မြေပြန့်​ ဆို​ပေမဲ့ တပ်​ကုန်း ရမည်းသင်း သာစည်​ ဆိုတဲ့ မြို့ ​တွေဟာ ရှမ်းပြည်​နယ်​နဲ့ ထိစပ်​​နေတဲ့ မြို့​တွေ ။ အဲ့ဒိထဲမှာ ကျ​နော်​တို့ တပ်​ကုန်း ဆိုတဲ့ မျြို့​လေးက မြို့သက်​အနုဆုံး ၁၉၆၀ မှ မြို့ဖြစ်​လာတာ ။ ဆို​တောကာ ​တောလည်းမကျ မြို့လည်းပီပီ ပြင်​ပြင်​ မဖြစ်​​သေးတဲ့ မြို့​လေး တစ်​မြို့ပါ ။
တောင်ပေါ်သား says: အပိုင်း ၂ လုပ်တော့လေ ဆရာရဲ့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7172
Mike says: .ခီများစာဖတ်ပြီးမောတယ် ကိုနီေ၇
Alinsett@Maung Thura says: ဆိုင်းတို့
မြန်မာ့ဆိုင်းဆို…တီးလုံးချည်းသက်သက် ငြိမ့်ငြိမ့်လေးတွေ နားထောင်ချင်တာ.. အဲအဲ… ဒီပိုစ့်ဖတ်ပြီးမှ သတိရသွားတယ်..